Maitiro Ekugadzira Maruva NeCrepe Pepa | Mhizha On
Irene Gil | | Crafts, Mapepa emhizha
Kwava kuswedera Zuva reValentine, nguva apo isu tese tanyanya kudanana, tichida kusangana neshamwari, mhuri uye mudiwa.
Hapana chinhu chakanakisa sekupa chimwe chinhu chakagadzirwa nesu, nekuda kwechikonzero ichocho nhasi ndinokuunzira a dzidzo yekugadzira mapepa akanaka emapepa crepe iyo inoshandiswa kupa nekushongedza.
Izvo zvakachipa uye zviri nyore kuita saka ngatione nhanho nhanho:
1 Zvishandiso zvekugadzira mapepa emaruva:
2 Nhungamiro yekugadzira mapepa maruva
3 maruva emapepa
Zvishandiso zvekugadzira mapepa emaruva:
Crepe bepa muvara raida, ini ndasarudza pink, nekuti zvinotitora kuenda kudanana, rakanakira Zuva raValentine. Kana iwe usina pepa repepa, pano unogona kuzvitenga muvara raunonyanya kufarira.
Ribhoni mumavara anosanganiswa.
Mabhatani, chigero uye glue zvakanyanya musilicone.
Nhungamiro yekugadzira mapepa maruva
Chinhu chekutanga chatinoita ndechekuti cheka muzvikwere, akaturikidzana mapepa.
Iyo yakawanda marara yatinayo, inowedzera kushongedzwa ruva redu richava.
Pamugumo mumwe wekwere, tinotanga peta kunge zig zag, Kuchengeta matese ese pamwechete.
Zvinofanira kunge sezvatinoona mumufananidzo pazasi.
Isu tinofukidza waya netepi yakasvibirira, tichishandisa guruu kuti irege kutishayisa zvombo.
Kukura kwetambo kunoenderana nesaizi yeruva redu, inofanira kunge yakaenzana.
Zvino, isu tinoisa tambo mukati chaimo hafu yepepa, ichimanikidza zvakanyanya, sezvatinoona mumufananidzo pazasi.
Tinotanga kuvhura peturu, nekuti izvo zvakakwana nazvo paradzana zvakanyanya rimwe nerimwe runyorwa rwepepa, kuyedza kuwana chimiro chakakomberedza.
Isu tinofanirwa kunge tichitaridzika semufananidzo pazasi:
Isu tinotanga chinonakidza chikamu, chiri chekushandisa fungidziro, kushongedza.
Mune ino kesi ini ndaishandisa mabhatani kugadzira pakati pe ruva riine.
Zvakare zvakare, ivo vanogona kushongedza ne maribhoni nemabhatani.
Aya ndiwo maratidziro aizoita:
Nemaruva aya, vanogona kuzviita corsages, shongedza matafura uye kupa sezvipo.
3 MAZANO ekugadzira maruva eCRAFTS ako
Iwe unogona zvakare kugadzira akasiyana marudzi e maruva emapepa neiyi nzira imwechete nekungochinja akacheka emicheto yekodhi koniononi. Mumufananidzo unotevera ndinokuratidza maratidziro matatu akasiyana anozopa akasiyana maruva ako.
Cheka magumo ari pakakwirira kuitira kuti mativi akanongedzwa abude, kana iwe ukacheka zvidimbu zvidiki unowana macation, uye kana ukaasiya iwo akakombama ruva rako rinotaridzika kunge ruva.
Rangarira kuti iwo makwere makuru, akakura iyo pepa repepuru maruva, uye zvikwere zvakawanda zvaunoshandisa, zvichakora. Izvi zvinofanirwawo kutarisirwa kana uchigadzira.
Ndinovimba unonakidzwa uye tinowana mamwe mazano nguva inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts uye zvinhu » Mapepa emhizha » Maitiro ekugadzira maruva kubva mupepa re crepe
Ini ndakanyatsoda zano iri, ndatenda
Mhoro ndinokutendai zvikuru, zviri nyore kwazvo uye zvinoshanda
Pindura kune conchis
Zviri nyore kwazvo uye zvakanaka, maita basa.
Pindura kuna Francis
Maitiro ekugadzira chirahwe chine t-shati mutsvuku uchidzokorodza T-shirt